VACC 15000 15000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
price under $20,000 USD
price under $40,000 USD
price above $40,000 USD
၅ ဂါလန်ဘူးများကို ရေဖြည့်ပေးသောစက်
Bottle (5-liter to 20-liter)
VAPET400 - 5L
Bottle (under 2-Liter)
0 /0အမှတျပေးမယျ
VACC15000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
စံချိန်စံညွှန်း - ISO 9001:2015
မော်ဒယ်- VACC 15000
ထားသိုနိုင်သော သက်တမ်း-၁၅ နှစ်
တစ်နိုင်ငံလုံး အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည်
ဆှေးနှေး ဝယျယူရနျ အျောဒါတငျမယျ +84 839 31 31 31 (7:30 - 21:00)
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်း , RO-VACC-mm
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC15000
Line water filter 15000 liters / h VACC15000 composite mechanical valve used in water purification technology RO- modern water filter today.
တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် VACC15000 ပေါင်းစပ်အဆို့ပါတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ RO ခေတ်မီရေသန့်စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
Members of Viet An Company Viet An မှ ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့အဝင်များ
Water treatment capacity with ultra-fast, ultra-pure product should have beenalot of big brands use water filters. If you are looking to invest in installingaproduction line system of pure water modern industry today, this is one of the leading choices for you.
အလွန်မြန် အလွန်သန့်စင်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက ရေစစ်ထုတ်ပစ္စည်းတံဆိပ်အများကြီးမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ခေတ်မီတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
Nearly 20 years of development and growth, the company shares Vietnamese general trade commitments An always provide our customers with genuine water purification products, high quality at the best price.
နှစ် ၂၀ နီးပါး ရပ်တည်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က စစ်မှန်သော ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေကို အသင့်တော်ဆုံး ဈေးနှုန်းများနဲ့ ပေးနေပါတယ်။
6 benefits you receive when installing 15,000 water purification chain VACC15000 An offer by Vietnam
Viet An ရဲ့ VACC15000 ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို တပ်ဆင်တဲ့အခါ ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူး ၆ ခု
+ Ownawater purification system of industrial quality on the market 1. Here is the updated technology RO water purifier latest in 2018, overcoming the limitations of the technology risk applications in the refinery launched earlier when creating water too pure, now this product has additional mineral supplement for additional columns to create the necessary minerals to the body after filtration. Help to ensure both product water purified water standards are just as good for the user.
+ဈေးကွက်မှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ ဒါက ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် RO ရေသန့်ပေးသော နည်းပညာပါ။ ဒီစက်မှာ အခြား ကော်လမ်တွေအတွက် စစ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကို ပြုလုပ်ပေးမယ့် ဖြည့်စွက်ချက်ရှိပါတယ်။ ရေသန့်ရဲ့ အရည်အသွေးကို သေချာအောင် ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။
+ Smart design, operation system operation extremely simple, just connect to the mains, ensure adequate water flow upstream to the filter system is the process of water purification will take place.
+စမတ်ကျပြီး လုပ်ဆောင်ရလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ မိန်းတွေကို ဆက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာထဲကို လုံလောက်သောရေ စီးဆင်းမှုကို သေချာစေပါတယ်။
+ Fast water filtration time, the quality of filtered water treated through VACA15000 always meets the standards of pure drinking water 6-1-2010 / BYT of the Ministry of Health +ရေစစ်ထုတ်တဲ့အချိန် မြန်တယ်။ VACA15000 နဲ့ စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ရေသန့်က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
+ Fast capital recovery time, on average, customers using Viet An industrial water purification systems share after only about 1 year that they have recovered their capital and in the following years, they have benefits. stable profit
+အရင်းငွေ ပြန်ရတာ လွယ်တယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဝယ်ယူသူတွေက Viet An မှ စက်တွေကို ဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အရင်းငွေပြန်ရကြပါတယ်။
+ Create jobs for many workers, contributing to improving the lives of workers
+လူအများကြီးအတွက် အလုပ်တွေဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် အလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝ တိုးတက်မယ်
+ Contribute actively to the care and improve the lives of people because with the production of hundreds of bottle purified water 20 liters, 21 liters of the market has helped many people use pure water ensuring standards, protection of health
+လူအများကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုရာလည်း ရောက်တယ်။ ၂၀ လီတာ ၂၁ လီတာ ရေသန့်ဘူးတွေကို ဈေးကွက်မှာ ဖြန့်ချီတဲ့အခါ လူတွေက ရေသန့်တွေကို သောက်သုံးပြီး ကျန်းမာနိုင်ပါတယ်။
What needs to prepare production line RO water filter of Vietnam An 15000 VACC1500
VACC15000 ရေစစ်ထုတ်လိုင်း ပြင်ဆင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ
+ Choice of water source
Capacity of 15000 liters of pure water per hour isavery large capacity, therefore only suitable for business establishments produce pure bottled water, bottled medium and large capacity.
တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ရေသန့်ဘူး အကြီးအလတ် ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေအတွက် အရမ်း သင့်တော်ပါတယ်။
+ Prepare the premises
Establishments have been operating manufacturing business Bottled water, bottled purified and want to improve, upgrade and expand the scale or withanew investor starts production, the requirement to prepare before it is determined to carry out water treatment. Eachadifferent water source would require appropriate remedial measures to bring the best performance for process water treatment.
ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေမှာ တိုးတက် အတင့်မြှင့် စကေးတွေ တိုးချဲ့ဖို့ ရေပြုပြင်မှုကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ ရေအရင်းအမြစ် တစ်ခုချင်းက ရေပြုပြင်ဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအတွက် သင့်တော်တဲ့ ပြုပြင်မှု လိုအပ်ပါတယ်။
Once identified, the water resources should take into account the area of installation. When you choose water purification chain system 15000 liters / h by the Vietnamese security will be our offer consulting, design installation diagram based on actual factory premises of customers. By production space as well as one of the requirements needed to ensure the licensed production for each production and business establishments.
ရေအရင်းအမြစ်ကို တပ်ဆင်မယ့် နေရာကို ယူလာရပါ့မယ်။ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သန့်စင်ပေးသော ချိန်းကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု တစ်ခုချင်းအတွက် လိုင်စင်ရရှိအောင်လည်း အကြံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Required space for installation of production lines VACC15000 pure water, room design manufacturer for installation system Filling of bottles and cans. Filling the room must be constructed with transparent glass door systems and sterilized regularly.
VACC15000 ရေသန့်လိုင်းကို တပ်ဆင်ဖို့ နေရာလိုအပ်ချက်ကြောင့် ဘူးတွေဖြည့်ဖို့ တပ်ဆင်သော စနစ် အခန်း ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ အခန်း ဖြည့်တာကို ဖန်တံခါးစနစ်တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ပါတယ်။
+ Prepare all relevant papers
Terms voila papers is imperative that production and business establishments must also fully prepared. Such as business licenses, certificates of food safety.
+လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း
ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြောင့် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ ဥပမာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း လိုင်စင်၊ အစားအသောက်လုံခြုံရေး လက်မှတ်
+ Prepare labor
Capacity of 15000 liters / h respectively with the ability to consume products very large production base. Water filtering process takes place entirely self-contained, automatic water filter, but since it'safilter chain using mechanical valve system should have adjustable valve system when conducting rinse filtration column.
တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက့ကြီးမားတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းက ကိုယ်တိုင် အော်တို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီစက်က စက်သုံးအဆို့စနစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
If production facilities investment Filling system automatic machine still needs labor supervision and control system. Workers need the shipping ...
And needed manpower market development ...
ထုတ်လုပ်မှုတွေက ခေတ်မီသော်လည်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ အကြံနဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ်က လိုအပ်ပါသေးတယ်။ လူသားတွေကို ပို့ဆောင်ပေးဖို့နဲ့ ဈေးကွက်စီးပွါးရေးအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
+ Prepare related machines
When you want to use the production line of pure water technology applications water filter ro 15000 liters / h VACC15000 should invest more computer systems Filling, haveafilm, machine labeling bottles, flasks, machine shut log shrink, if conditions than they could invest the bottle blowing machine, and just to both bottles, cylinders accommodate production use of the unit while they can provide cover pet bottle, bottle for other production facilities.
VACC15000 စက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လောင်းဖြည့်စက်၊ ဖလင်၊ လေဘယ်၊ ပုလင်း၊ လော့အရှုံ့တွေနဲ့ လိုအပ်ရင် ဘူးလေမှုတ်စက်တွေကိုပါ တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
To be able to possess lines pure water treatment VACC15000 l / h, then you need besides 54900 USD preparation expenses for the purchase of other machines ranging from 5000 to 10000 dollars.
VACC15000 စက်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ၅၄၉၀၀ ဒေါ်လာနဲ့ အခြားစက်တွေအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀ အထိ ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။
Information specialist chain prices of pure filtered water, bottled water production industry by Vietnam An offer will be disclosed in you can easily reference and comparison.
Viet An မှ ရေစစ်ထုတ်တဲ့ စက်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကို လွယ်လွယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
This sizable investment, but profits that businesses can recoup also extremely large. Because the water purification products that Vietnamese police are providing genuine, stable operation, fewer problems occur, which savesalot of repair costs. The lifespan of the machine durable, longer usage time than the other similar product lines.
အရင်းကြီးသလို အမြတ်လည်း ကြီးပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ရဲတွေရဲ့ ရေသန့်စင်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက စစ်မှန်တယ်။ လုပ်ဆောင်မှု တည်ငြိမ်တယ်။ ပြသနာနည်းတယ်။ စက်က ကြာရှည်ခံတယ်။ ပိုမိုကြာရှည်စွာလည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်။
Warranty service, maintenance products Vietnamese police are always the best by Vietnamese police has4branches in Hanoi and Ho Chi Minh City, Da Nang, Buon Ma Thuot withastaff of technicians crowded, many years of experience will customer support in the shortest possible time to ensure that the manufacturing process of customers at least interrupted.
ဗီယက်နမ်ရဲတွေက Hanoi and Ho Chi Minh City, Da Nang, Buon Ma Thuot မှာ ရုံးခွဲ ၄ ခု ရှိပြီး အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ထိန်းသ်ိမ်းမှု အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတွေ ပေးပါတယ်။ နည်းပညာရှင်တွေ အများကြီးရှိပြီး နှစ်ရှည်အတွေ့အကြုံအရ ဝယ်ယူသူတွေကို ထုတ်လုပ်မှု နှောင့်ယှက်မခံရအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
If you have questions about products of Vietnam An VACA15000 water filtration please contact us on 0949 414 141
VACC15000 ရေသန့်စစ်ထုတ် ကိရိယာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
1. VAQGF900 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 900
VAQGF900 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine
Capacity: 900 jars of 20 liters/hour
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၉၀၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုစံ: ISO 9001:2015
အာမခံချက်:၁၂ လ ( ၁ နှစ်)
2. Automatic Steam Membrane Shrinking Machine
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
The machine uses the heat of steam to shrink the membrane, ensuring nice appearance without bring wrinkled. The membrane shrinkage speed is fast
The machine is designed with 1 steaming chamber andashrinking chamber.
The shrinking chamber is made of stainless steel, suitable for wet environments. This machine is easy to clean and durable with the shelf life of over 15 years
ဒီစက်က အလွှာကို လုံးဝတွန့်ကြေခြင်းမရှိဘဲ ရှုံ့ပေးတဲ့စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရှိန်နှုန်းကလည်း မြင့်မားပါတယ်။ ဒီစက်ကို ရေနွေးငွေ့အကန့်တစ်ခုနဲ့ ရှုံ့တဲ့အကန့်တစ်ခုဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ဒီစက်က stainless steel နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် စိုစွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒီစက်က သန့်ရှင်းဖို့လွယ်ကူပြီး ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
1 Push pump with 304 Stainless steel head စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ် 15 pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ 15 pc VA/ USApec
4 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ 1 pc VA/ USApec
5 Mn sand Mn သဲ full Kg VA/ USApec
6 Quartz sand သလင်းကျောက်သဲ full Kg VA/ USApec
73gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့ 1 pc VA/ USApec
8 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ 1 pc VA/ USApec
93gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့ 1 pc VA/ USApec
10 Activated carbon ကာဗွန် full kg Holland
11 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ 1 pc VA/ USApec
12 Auto valve အော်တိုအဆို့ 1 pc VA/ USApec
13 Ion exchange resin ရေပျော့ပြောင်းလဲပေးသော အစေး full liter India/ England
14 40 Filter Cartridge ၄၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 15 pc VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံး စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
16 Multi-Stage Booster pump system အဆင့်များစွာပါသော အားပြင်းရေစုပ်စနစ် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်4pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး 8 pc Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင်းသောမီတာ4pc Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ 11 pc Taiwan
21 Oil pressure gauge ဆီဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ2pc Taiwan
22 Copper solenoid valve ကြေးနီသံလိုက်အစို့ 1 pc Cn Korea
23 Brine tank ပင်လယ်ရေတိုင်ကီ 1 pc VA/ USApec
24 Electrical system လျှပ်စစ်အားစနစ် 1 set LK Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ်6pc Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်5pc VA/ USApec
27 Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 14 pc VA/ USApec
29 PPR pipe and accessories PPR ပိုက်နှင့် အဆင်တဆာများ full set Vietnam
30 Stainless steel frame စတိန်းလက်စ်စတီးဖရိန် full set Vietnam
Hỏi đáp & đánh giá VACC 15000 15000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 150 150LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 300 300LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 400 400LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 750 750LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 1000 1000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 1200 1200LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 1500 1500LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 2000 2000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 3000 3000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 4000 4000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 5000 5000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 10000 10000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 20000 20000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 35000 35000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
VACC 70000 70000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
© 2019 VIETAN အသုံးပွုမှုပယျေလစီ လုံခွုံရေး